ဖူးနုသဈ: ရှဆေ့ကျရနျ ခရီး
Posted by ZT at 7:30 PM
အင်း လေ့လာစရာတွေ လေ့လာစရာတွေ အားလုံးပြောင်းရင်တော့ လိုက်ရမှာပဲ၊ အိုအက်စ်မှာ ပါရင်ပိုကောင်းတာပေါ့၊
ခက်တာက ကို zt ဆိုဒ်မှာကို ကျွန်တော် ဖတ်နရတဲ့၊ ဖတ်လို့ အဆင်မပြေတဲ့ စာလုံးတွေ ရှိနေတော့ မပြောင်းရဲဘူးဗျ။ ဥပမာ.... "အချိန်ပေးပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးတဲ့အတွက်.... ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။" ဆိုတဲ့ စာကြောင်းမှာ ရေးတဲ့သူ နာမည်ကို ကျွန်တော် ဖတ်လို့ လုံးဝ မရပါ။
I try to start today
မြန်မာဖောင့်အကြောင်း စကားစပြောလိုက်ရင် ပွဲစည်တတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း အသုံးပြုသူတွေအတွက် လွယ်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ ဇော်ဂျီကိုပဲ ဆက်သုံးနေကြပါတယ်။
ဖောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်ရတာ ဇော်ဂျီဖောင့် လုပ်တဲ့လူတွေက စေတနာမှန်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တခြားယူနီကုတ်လုပ်တဲ့လူတွေက ကိုယ့်ဖောင့်လူသုံးများအောင် ဇော်ဂျီကို တိုက်ခိုက်ပြောဆိုရင်း မအောင်မြင်ဖြစ်နေကြတာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ အသုံးပြုသူတွေကို စော်ကားတဲ့စကားတွေ ဥပမာ လူမိုက်လို့ ခေါ်တာမျိုးတွေက တခြားဖောင့်တွေရဲ့ မအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းတွေပါပဲ။
အဘ တို့ကအသက်ကြီးပြီ..ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလဲ လျောက်လုပ်ဖို့ ဉာဏ်မမီတော့ဘူး..လှေကြီးထိုးရိုးရိုး..လုပ်နေကြဇော်ဂျီလေးနဲ့ပဲ စာရေးနေတော့မယ်..သူ့ဟာသူစံနှုန်းကိုက်ကိုက်မကိုက်..ကိုယ့်ဖာသာစာရေး စာဖတ်နေရရင်ကျေနပ်ပါပြီ၊ ပြီးတော့ အများကဇော်ဂျီသုံးနေလို့ လွယ်လွယ်ဖတ်ရနေတာကို ကိုယ်က သူများထက်ထူးပြီးနဖူးမှာလဲ တက်ပေါက်မနေချင်တော့ပါဘူး ။
အပေါ်က အဘဆိုတော့ ကိတ်စမရှိပါ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် လူငယ်လို့ ယူဆသောသူများ.. အင်တာနက်ဆိုတာကြီးကို နောက်ထပ် အနှစ် ၄၀ သို့ ၅၀ လောက် သုံးမည့်သူများကတော့ ယူနီကုတ်ကို ကြိုးစားပြောင်းသုံးသင့်ပြီဟု ထင်ပါသည်... ယူနီကုတ်ပြောင်းသုံးဖို့ အကြောင်းကိုပဲ ဇော်ဂျီဖောင့်သုံးပြီး ရေးရသည်ကိုတော့ ကံတရားရဲ့ သရော်ချက်ဟု သာယူပါရန်...
အဲဒါတွေပြောတာပေါ့ ကံဆိုတာလူကလုပ်တာ Unicode လုပ်တဲ့လူတွေ အဟုတ်မလုပ်တာ။ Unicode ကတော့စံပါ၊ Unicode လုပ်တဲ့လူတွေက ပိုပြီးတော့တောင် စံသေးတယ်။ ဇော်ဂျီဆက်သုံးရင် Googleက ကိုယ့်ဘလော့ကို ရှာပေးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး လိုလိုနဲ့ပြောတာမျိုးတွေလေ။
will there be any converter from Zawgyi to Uni-code?
Online converter is available at http://paragu.parabaik.info
For more details about conversion, please refer to
That's not scientific problem. It'sasocial problem. I haveagame theory model that hasastable state (equilibrium) with majority Zawgyi. Without enough force (tremendous force), the equilibrium itself can't be changed -- according to game theory.
I am also proposingatwo-phase-commit-based plan to step-up to Unicode. I'll finish up another blog post for that.
စံတခုတည်း ရှိစေချင်တာတော့ အမှန်ပဲ. ဒါပေမယ့် ယူနီကုတ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ သုံးနိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှ အောင်မြင်မယ်ထင်တာပဲ.အပေါ်မှာဖတ်ကြည့်ရသလိုမျိုးဆို
(ပြောင်း)ဆိုတဲ့စကားကို ကျောင်းမှသင်ခဲ့ရသလိုမျိုး သဝေထိုး ပစောက် ရပင့် ရေးချ င သတ်ပြောင် ၀စ်စနှလုံးပေါက် ပြောင်း ဆိုပြီး ရေးလို့မရဘူးဆိုတော့ စာရေးနိုင်ဖို့ သတ်သတ်ထပ်သင်ထားမှ ရေးနိုင်တော့မလို ဖြစ်နေမှာပေါ့..ဘယ်လိုလုပ်ကြပါ့မလဲ.ကီးဘုတ်အမျိုးမျိုးရှိနေပြန်တော့လည်း တယောက်တပေါက်တွေ ရိုက်နေကုန်ကြအုန်းမယ်..
ယူနီကုတ် ကီးဘုတ် အတော်များများမှာ အသံထွက် အတိုင်းပဲ ရိုက်ရပါတယ်။ စာလုံးစီတာကို နောက်ကွယ်မှာ ကီးဘုတ်က အလိုအလျောက် လုပ်ပေးပါတယ်။ မှားရိုက်ရင်လည်း ကီးဘုတ်က အလိုအလျောက် မှန်အောင် ပြန်စီပေးပါတယ်။ storage မှာ မြင်တဲ့အတိုင်း (visual order) နဲ့ မသိမ်းဘဲ အစီအစဉ်အတိုင်း (Logical Order) နဲ့ သိမ်းတာကို စာရေးတဲ့သူက ဆိုလိုချင်တာပါ။
ကောငျးပါတယျ...ကနြျောတို့ ရဲ့ အှနျလိုငျးမွနျမာ စာ ကမ်ဘာနဲ့ ရငျဘောငျ တနျးနိုငျအောငျ...အငျတာနကျသုံးသူ လူတိုငျး ယူနီကုတျကိုသုံးသငျ့ပါတယျ..ကနြျောလညျး စသုံးနပေါပွီး..ကြေးဇူးတငျပါတယျ..ဒီပိုဈ့ကိုဝမြှေပေးတဲ့အတှကျ...